Shirka Madaxda iyo Maamul Goboleedyada oo Maanta furmaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maanta oo sabti ah (3-April-2021) ayaa lagu ballansan yahay in uu Muqdisho ka furmo kullan uu ku baaqay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaa oo u dhexeeya Madaxda Dowladda Federaalka, Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Madaxda maamulada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa lagu wadaa inay ka qey galaanka Shirka Maanta ka furmaya Teendhada Afisyooni ee Magaalada Muqdisho.
Todobaadyadii ugu dambeeyay Beesha Caalamka ayaa waday dadaalo kala duwan oo isugu keeneyso Madaxda dowladda iyo kuwa maamulada, kadib markii Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ay shuruudo ku xireen qeyb galka shirarka looga hadlayo doorashada.
Habeenkii xalay aheyd ayaa waxaa la sheegay in la isku afgartay in ammaanka goobta Maanta uu shirka ka dhaacyo ay ku sugaan Ciidamada AMISOM, isla markaana Madaxda ay banaanka Afisyooni uga soo tegaan Ilaaladooda gaarka ah marka laga reebo kuwa dharcadka ee Madaxda la socda.
Maareeyaha shirkada WADAAGSAN Cali-Siciid Faadi oo diginin kama dambeysey ah la siiyey